Ngwaọrụ Ihe Ngosipụta Disk. Mmepụta oyiri Drive & Disk. Disk Detuo Software.
DataNumen Disk Image bụ ngwá ọrụ dị ike iji mmepụta oyiri ma weghachite diski ma ọ bụ draịva. O nwere ike imepụta ma weghachite onyonyo diski ma ọ bụ site na byte site na ihe osise. Ọ bara uru maka ndabere data & mgbake, disk / drive copy & cloning, na nyocha.
4.90 / 5 (site na 1,626 votes)
Gịnị mere DataNumen Disk Image?
Ihe ngosi Disk gosipụtara ihe omume ọkachamara atọ ọzọ nke na-enweghị ike ịmepụta ihe oyiyi ISO - nke a na-arụ ọrụ zuru oke. Ọ bụ ezie na ọ nweghị ike
Ogbe mmepụta oyiri
Main Akụkụ na DataNumen Disk Image v2.2
Kwado ụdị diski na draịva niile.
Nkwado iji weghachite data onyonyo laghachi na draịva.
Nkwado na mmepụta oyiri data site na mgbasa ozi emerụ.
Nkwado iji dochie mpaghara ndị mebiri emebi na data akọwapụtara.
Nkwado na mmepụta oyiri multiple diski na draịva na ogbe.
Kwesịrị iji ya rụọ ọrụ dịka ihe eji eme ihe gbasara kọmputa na nchọpụta elektrọnik (ma ọ bụ e-chọpụtara, eDiscovery).
iji DataNumen Disk Image iji mepụta ihe oyiyi maka draịva na diski
na DataNumen Disk Image, ị nwere ike ịmepụta ihe oyiyi maka draịva na diski, maka ebumnuche dị iche iche, dị ka ndabere, weghachi, forensics na data recovery.
Cheta na: Tupu ike mbanye ma ọ bụ disk oyiyi na DataNumen Disk Image, biko mechie ngwa ndị ọzọ.
Họrọ draịva ma ọ bụ diski onye ekepụtara onyogho ya:
Ọ bụrụ nbanye na draịva USB, mana enweghị ike ịhụ ya na draịva ma ọ bụ ndepụta diski. Nwere ike pịa
bọtịnụ ma nwaa ọzọ.
Na-esote, setịpụ aha njirimara faịlụ onyonyo mmepụta:
Can nwere ike itinye aha faịlụ ihe oyiyi ozugbo ma ọ bụ pịa
bọtịnụ na-agagharị na họrọ oyiyi faịlụ.
bọtịnụ, na DataNumen Disk Image ga start cloning data na draịvụ akọwapụtara ma ọ bụ diski ahụ, wee chekwaa ha na faịlị vidiyo mepụtara. Ogwe ọganihu
ga-egosi mmepụta oyiri.
Mgbe mmepụta oyiri usoro, ma ọ bụrụ na ihe oyiyi faịlụ na-kere ọma, ị ga-ahụ a ozi igbe dị ka nke a:
Ugbu a ị nwere ike iji ihe oyiyi disk maka nzube dị iche iche, gụnyere:
Jiri ya dị ka ndabere nke mbụ mbanye ma ọ bụ disk.
Weghachite onyonyo ahụ na draịva mbụ ma ọ bụ diski, ma ọ bụ na draịvụ ma ọ bụ diski ọzọ.
Naghachi data site na oyiyi ahụ.
Mee nyocha data gbasara nyocha na onyinyo ahụ.
DataNumen Disk Image 2.2 weputara na Disemba 24th, 2020
DataNumen Disk Image A na-ahapụ 2.0 na November 9th, 2020
DataNumen Disk Image A tọhapụrụ 1.9 na June 14, 2020
DataNumen Disk Image A na-ahapụ 1.8 na February 1st, 2019
Melite ọrụ weghachite diski.
DataNumen Disk Image A tọhapụrụ 1.6 na Dec 12, 2016
DataNumen Disk Image A na-ahapụ 1.5 na Jenụwarị 18th, 2015
Nkwado iji weghachite ihe oyiyi azụ na draịva.
DataNumen Disk Image 1.1 wepụtara na October 21st, 2014
Melite mmepụta oyiri ọsọ.
Tinye ndekọ ọnụ ọgụgụ nke mmepụta oyiri usoro.
DataNumen Disk Image A tọhapụrụ 1.0 na Septemba 9, 2014
Nkwado Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8 na Server 2003/2008/2012.
DataNumen Backup bụ ihe kachasị mma iji kwado ma weghachite data dị mkpa na faịlụ gị.